Semalt: कसरी उत्पादन उद्योग बाट एक वेबसाइट स्थिति?
निर्माण कम्पनीहरूका लागि एसईओ नयाँ ग्राहकहरू र वितरकहरूमा पुग्नको लागि एक प्रभावकारी च्यानल हो। खोज परिणाममा तपाईंको प्रतिस्पर्धालाई कसरी पछाडि बढाउने भन्ने बारेमा हाम्रो लेख पढ्नुहोस्।
निर्माण उद्योग को विशेषताहरु
आर्थिक गतिविधिहरू जुन उत्पादनको उत्पादनमा विशेषज्ञ हुन्छन् तथाकथित उत्पादन कम्पनीहरू पनि पर्छन्। यी कम्पनीहरू धेरै मापदण्ड द्वारा एक अर्का भन्दा फरक हुन सक्छ। यी मध्ये सब भन्दा महत्त्वपूर्ण राम्रो उत्पादनको प्रकार र उत्पादनको प्रकार हो। तसर्थ, हामी इकाई, सीरियल, र सामूहिक उत्पादन पूरा गर्ने कम्पनीहरू फेला पार्नेछौं। वर्षौंको अवधिमा अर्थव्यवस्थाको यस क्षेत्रले उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। युरोपमा, सौन्दर्य प्रसाधन, सिकर्मी, र निर्माण उद्योगहरूले सबै भन्दा राम्रो गरिरहेका छन्। सबै कुराले संकेत गर्छ कि निर्माण क्षेत्र आगामी केही बर्षहरूमा अझ द्रुत गतिमा बढ्नेछ।
उत्पादन उद्योग मा एक कम्पनी वेबसाइट स्थिति को प्रक्रिया
युरोपमा उत्पादन क्षेत्र निरन्तर बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले व्यक्तिगत उद्योगहरूमा उत्पादकहरूको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। तसर्थ यो एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति को मुद्दाहरूको ख्याल राख्नु लायक छ जसले आफूलाई अरूबाट अलग गर्दछ। नयाँ ग्राहकहरु सम्म पुग्न एक उत्तम च्यानल उपर्युक्त गुगल खोज इञ्जिन हो। SEO गतिविधिहरू हाम्रो वेबसाइटको प्रकारसँग मिल्नु पर्दछ Semalt.com। एक अनलाइन स्टोर फरक तरिकाले स्थित छ, र अन्य गतिविधिहरू कम्पनीको व्यवसाय कार्डको रूपमा वेबसाइटहरूमा समर्पित हुनेछ।
उत्पादनहरूको साथ अनलाइन स्टोरहरूको स्थिति
एक राम्रो समाधान पनि तथाकथित लामो पुच्छर हो, यसको मतलब धेरै शब्दहरू मिलेर राम्ररी परिभाषित क्वेरीहरू हुन्। यी कुञ्जीशब्दहरू खास ग्राहकहरूको खोजीमा ग्राहकहरूले खोजी गर्दछन्, ताकि तपाईं पृष्ठमा रूपान्तरणहरूको संख्या र मूल्य बढि प्रभावकारी ढ .्गले वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई धेरै उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कुञ्जीशब्दहरू पाउनका लागि उत्तम प्यारामिटरहरू जस्तै ubersuggest।
यदि तपाईंको ब्रान्ड अनलाइन पहिचान योग्य भयो भने, यो हाम्रो सेवाको साथ ब्रान्ड केन्द्रित स्थिति सुरू गर्न लायकको छ AutoSEO, वेबसाइट पदोन्नति को लागी एक अद्वितीय एसईओ उपकरण। तपाईंको कम्पनीको नामको साथ कुञ्जी वाक्यांश छनौट गर्नुहोस्: प्राकृतिक सौन्दर्य प्रसाधन + ब्रान्ड।
वेबसाइटको शक्ति र अधिकारमा वृद्धि निस्सन्देह SERP मा अधिक दृश्यता ल्याउँदछ। हामी अझ बढी प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरूको लागि हाम्रो अनलाइन भण्डारको स्थिति राख्न सक्दछौं जुन हाम्रो उत्पादन कोटीहरूमा अनुकूल हुनेछ। यी कुञ्जीशब्दहरूमा प्राय: सामान्य शब्दहरू दिइएको महीनामा खोजहरूको ठूलो मात्राको साथ हुन्छन्। यसले यी मुख्य वाक्यांशहरूलाई धेरै नै गाह्रो बनाउँछ तर वेबसाइटमा ट्राफिकलाई बढ्दो सय प्रतिशतमा बढाउन सक्छ।
B2B क्षेत्रबाट ग्राहकहरूको लागि छनौट कुञ्जी शव्दहरूको मामलामा, निम्न संरचना भएका वाक्यांशहरूले राम्रोसँग काम गर्दछ: उत्पाद नाम + शब्द "निर्माता"। हामी पक्का यो सुनिश्चित गर्न सक्छौं कि हामी हाम्रो प्रस्ताव संग सही ठेकेदारहरुमा पुग्नेछौं।
व्यवसाय कार्डको रूपमा वेबसाइट स्थिति
यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन स्टोर चलाउन चाहानुहुन्न भने, यो व्यापार कार्डको रूपमा वेबसाइट सेट अप गर्न लायक छ। यस अवस्थामा, हामीले हाम्रा उत्पादनहरू र ब्रान्ड आफैंलाई उत्तम उत्तम तरिकामा प्रस्तुत गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो एक राम्रो अभ्यास हो कि एक वेबसाइट बनाउन को लागी विभिन्न subpages हुनेछ। एक पृष्ठ संस्करण एसईओ दृष्टिकोण को दृष्टिकोण बाट प्रतिकूल हुन सक्छ।
यस अवस्थामा, स्थिति पनि उपयुक्त किवर्डहरूको चयनमा केन्द्रित हुनेछ जुन विभिन्न बिक्री क्षेत्रका ग्राहकहरूको समूहमा अनुकूल हुनेछ। व्यापार कार्ड प्राय: स्थानीय उद्योगलाई जनाउँछ। यदि हामी केवल हाम्रो प्रस्तावको साथ चयनित क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा पुग्न चाहन्छौं भने स्थानीय पोजिशनिंगको अंशको रूपमा कुञ्जीशब्दहरू प्रयोग गर्न लायक हुन्छ। वाक्यांशहरूले चयन गरिएको क्षेत्र/क्षेत्रको नाम समावेश गर्नुपर्दछ।
प्राय:, उत्पाद सूचीको सट्टा, व्यवसाय कार्डको रूपमा वेबसाइटमा, हामी निर्माताको क्याटलगहरूलाई पीडीएफ ढाँचामा फेला पार्न सक्छौं। गुगल खोजी ईन्जिनमा परिवर्तनहरू अवलोकन गरेर हामी याद गर्न सक्दछौं कि यस्तो विस्तार भएको कागजातहरू अनुक्रमित छन्, त्यसैले यो सही अप्टिमाइजेसनको ख्याल राख्नु लायक छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू सही नाम, मैत्री URL, सानो आकार, र pdf फाईलको प्रतिक्रियाशीलता हो।
यदि हामी यसको उपयुक्त प्राविधिक अप्टिमाइजेसनको ख्याल गर्दैनौं भने इ-कमर्स र छवि वेबसाइटको स्थितिले चाहेको नतिजा ल्याउन सक्दैन। यस फाँटमा सबै सबै महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू हाम्रो ब्लग Semalt.com मा फेला पार्न सकिन्छ
औद्योगिक क्षेत्रमा सामग्री मार्केटिंग
किवर्डहरू जुन मैले पहिले उल्लेख गरें वेबसाइटमा उत्तम राखिएको बहुमूल्य र अद्वितीय सामग्री हो। औद्योगिक क्षेत्र उत्पादनमा आधारित छ, त्यसैले कोटी र वर्गीकरण विवरण धेरै महत्त्वपूर्ण छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पाठहरू आन्तरिक र बाह्य नक्कलबाट स्वतन्त्र छन्। तपाइँ Semalt शक्तिशाली एसईओ उपकरण आफ्नो व्यापार को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ती उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई हाम्रो प्रस्तावको बारेमा सान्दर्भिक जानकारी पनि प्रदान गर्नुपर्दछ।
एक राम्रो समाधान पनि एक उत्पाद ब्लग सेट अप गर्न को लागी हाम्रो उत्पादहरु र उद्योग गाईडहरु को बारे मा लेख हो। यसका लागि धन्यबाद, तपाईंले ग्राहकहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुहुनेछ र वेबसाइटमा उनीहरूको संलग्नता सुदृढ पार्नुहुनेछ। एक कम्पनी ब्लग पनि तपाइँको तपाइँको क्षेत्र मा एक साँचो विशेषज्ञ बनाउन सक्छ। यो आफूलाई प्रविष्टिमा सीमित लायक पनि छैन। ट्यूटोरियल वा प्रमोशनल भिडियोहरू तपाइँको साइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न पनि एक उत्तम विचार हुनेछ।
वेबसाइटमा थपिएको प्रत्येक पाठ राम्रोसँग अनुकूलित हुनुपर्दछ। ख्याल राख्नुहोस्:
अद्वितीय उपपृष्ठ शीर्षक र तिनीहरूको विवरण, कुञ्जी शब्दहरूको साथ समृद्ध।
हेडिings (H1-H3) ) - शरीरमा उपयुक्त हाइरार्कीको साथ हेडिंगहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
बोल्डहरू र ईटालिकहरू - यो कुञ्जीशब्दहरू हाईलाइट गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा दिइएको सबपेजको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी।
फोटोको आकार र Alt वर्णन - वेबसाइटमा ग्राफिक्स को वजन अनुकूलन र फोटो को समर्पित वैकल्पिक वर्णन राख्नुहोस्।
आन्तरिक लिinking्क वेबसाइटमा नेभिगेसन सुविधा पुर्‍याउन सामग्रीमा अन्य उपपृष्ठहरूमा लिंकहरू समावेश गर्नुहोस्।
यी मुख्य कारकहरू हुन् जुन पाठकहरू र गुगल क्रलरहरूमा उपयोगी छन्। यसको अनुप्रयोग पछि, चयन गरिएका कुञ्जी शव्दहरूको लागि खोजी ईन्जिनमा उच्च स्थानहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ।
तपाईंको सोशल मीडिया च्यानलहरूमा एकै साथ सामग्री मार्केटिंग सम्बन्धित गतिविधिहरू क्यारी गर्नुहोस्। यो तपाइँको ग्राहकहरु संग कुराकानी गर्न को लागी एक राम्रो ठाउँ हो, साथै बाह्य लिंकि activities गतिविधिहरु को लागी अतिरिक्त समर्थन प्रदान गर्न। त्यहाँ तपाईं नयाँ ब्लग प्रविष्टिहरू, उत्पादनहरू, वा कम्पनीमा परिवर्तनहरूका बारे जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। निस्सन्देह, सहि रणनीति जसले सम्भावित ग्राहकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ यहाँ महत्त्वपूर्ण छ।
लि building्क निर्माण पनि स्थिति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। बाह्य वेबसाइटहरूबाट लि Get्कहरू प्राप्त गर्ने क्रममा कारक हो। हाम्रो अनलाइन स्टोर वा कम्पनीको शोकेसको स्थिति सुदृढीकरण गर्न, उच्च स्रोतहरू भएको स्रोतहरू छान्नु उचित हो। सही स्थान छनौट गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो विषय हो। हाम्रो कम्पनीको प्रोफाइलसँग सम्बन्धित वेबसाइटहरूबाट लि link्क गर्न उत्तम छ। यदि हामी स्थानीय रूपमा आफूलाई स्थान दिन्छौं भने हाम्रो क्षेत्रबाट पोर्टलहरू छनौट गर्नुहोस्। लिंकहरू आफैंमा धेरै प्राकृतिक तरीकाले बाह्य डोमेनहरूमा देखा पर्दछ। लिंकहरू एch्कर/सफ्ट लि link्क र doffolow/noffolow ट्यागको सन्दर्भमा विविधिकरण गरिनु पर्छ।
साथै, याद गर्नुहोस् एकै समयबाट सबै समय लि link्क नगर्नुहोस्। बहुमूल्य डोमेनहरूबाट बढि लिंकहरू, हामी लि we्कहरू राम्रोसँग लिन सक्दछौं:
उद्योग वेबसाइटहरूमा प्रायोजित लेखहरू
अन्य ब्लगमा अतिथि पोष्टहरू
व्यापार साझेदार वेबसाइटहरु
एक राम्रो समाधान जब तपाईं मूल्यवान डोमेनहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धा विश्लेषण हुनेछ। यो एक निरन्तर आधारमा जाँच गर्न लायक छ जहाँ प्रतिस्पर्धीहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरूमा उनीहरूको लिंकहरू प्राप्त गर्छन्। तपाइँसँग प्रतिस्पर्धा अनुगमनका सबै सुझावहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ Semalt वेबसाइट एनालिटिक्स उत्पादन।
गुगल व्यवसाय कार्ड
यसको लागि धन्यबाद, हामी नक्सामा हाम्रो स्टोर, कार्यालय वा कारखानाको स्थान चिह्नित गर्न सक्दछौं। यो निर्माण कम्पनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ वितरकहरू वा स्थानीय ग्राहकहरूसँगको सम्पर्कको कारण। व्यापार कार्डमा कम्पनीको समीक्षा, समीक्षा, खुल्ने समय र फोटोहरू समावेश छन्। हाम्रो ब्रान्डमा ग्राहकहरूको विश्वासलाई सुदृढ पार्न यस सेवा लिनु उचित छ।
हाल, त्यहाँ अधिक र अधिक उत्पादन कम्पनीहरू छन्, जुन चयनित बिक्री बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धाको साथ सम्बन्धित छ। राम्रोसँग छनौट गरिएको मार्केटिंग रणनीतिले तपाईंलाई वेबमा देखिन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं अन्य कम्पनीहरूको अगाडि रहन चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूको गतिविधिहरूको अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईंको ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई जवाफ दिनुहोस्। ठिकसँग चयनित एसईएम गतिविधिहरू Semlat प्रस्ताव रूपमा निर्माण उद्योग को लागी तपाइँ को लागी सही लक्ष्य समूह पुग्न अधिक प्रभावी ढंग मा अनुमति दिनेछ।
१. निर्माण उद्योगबाट कसरी अनलाइन स्टोर गर्ने?
अनलाइन स्टोरको स्थिति निर्धारणको महत्त्वपूर्ण तत्व भनेको उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरूको छनोट हो। निर्माण उद्योगमा, सबै कुरा B2C र B2B ग्राहकहरू अनुरूप हुनु पर्छ। वेबसाइटमा अनौंठो र बहुमूल्य उत्पाद विवरणहरू वा ब्लग पोष्टहरू राख्नु राम्रो हुन्छ। बाह्य लिinking्क गर्दा सम्पूर्ण स्थिति प्रक्रियाको लागि थप समर्थन प्रदान गर्दछ। तपाईको अनुकूलन गर्न पनि महत्वपूर्ण छ e- वाणिज्य वेबसाइट सहि
२. कसरी उत्पादन कम्पनीको व्यवसाय कार्डको रूपमा वेबसाइट स्थित गर्ने?
यदि कम्पनी अनलाइन बेच्दैन भने, यो निर्माता र यसको उत्पादनहरु को बारे मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण जानकारीको साथ एक वेबसाइट निर्माण गर्न लायक छ। अर्को पोजिशनिंगको लागि राम्रो समाधान अनौंठो र उच्च-गुणवत्ता सामग्री सहित धेरै उप-पृष्ठहरूको सिर्जना हुनेछ। चयन गरिएका कुञ्जी शव्दहरू राख्नुहोस् र एक विशिष्ट दर्शकहरूको लागि अनुरूप बनाइएको र, को बारे मा नबिर्सनुहोस् बाह्य लिinking्क।
के सामग्री बजार निर्माण उद्योगमा प्रभावकारी छ?
सामग्री मार्केटिंग उत्पादन उद्योगबाट वेबसाइटहरूको एसईओ प्रक्रियामा एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यसले तपाईंलाई मूल्यवान र प्राकृतिक सामग्रीको साथ वेबसाईट समृद्ध गर्न अनुमति दिँदछ। एक कम्पनी ब्लग बनाएर, हामी सक्छौं वास्तविक विज्ञ बन्नुहोस् आफ्नो क्षेत्र मा। यसले हाम्रो ब्रान्डको अवधारणा र ग्राहकहरूको विश्वासमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्छ। सामग्री मार्केटिंग गतिविधिहरू तपाईंको सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा पनि गरिनु पर्दछ।